Iibhondi - ii-Geofumadas
Bona iGoogle Earth idibanisa kwi-Excel - kwaye uyiguqulele kwi-UTM
Ndineenkcukacha kwiGoogle Earth, kwaye ndifuna ukucinga ngolu hlobo kwi-Excel. Njengoko uyakubona, liyiqonga kunye neendlela ze-7 kunye neendlu ezine. Gcina idatha yeGoogle Earth. Ukukhuphela le datha, cofa ngakwesokudla kwi "Izindawo Zam", kwaye ukhethe "Gcina indawo njenge ..." Ukuze ube yifayile ...
Ukusebenzisa le template, unokwenza i-polygonal kwi-Microstation, ukusuka kuludwe lweebhetri kunye nemida e-Excel, okanye uludwe lwe-coordinates x, y, z. Icandelo le-1: Uluhlu lwezikhokelo kunye neendawo eziqhelekileyo Masithi sifuna le tafile yedatha ensimini: Kwiikholamu zokuqala unesitishi, ...
Ngoku kutshanje uJuan Manuel Anguita uye wandidlulisela entsha inguqulelo yale sicelo esiyiphakamisile ngaphambili, kodwa elo xesha lishiye ngeengxaki ezithile ngeenguqulelo ezintsha ze-Excel. Ukusetyenziswa kwayo kulula, kodwa kusebenza kakhulu. Kufuneka ungene kwinamba yendawo, uqhagamshelanisa x, y, z; Ndibeke ...
AutoCAD-AutoDesk, Ukulanda, Topography
Ithemplateli ye-Excel yenziwe ekuqaleni ukuba iguqulwe izilungelelaniso ze-geographic ukuya ku-UTM, ukusuka kwifomati yedesimali ukuya kumadigri, imizuzu kunye nemizuzwana. Okuphambene neemplate esele senze ngaphambili, njengoko kuboniswe kumzekelo: Ukongezwa: I-concatenates in a chain Uguqula kwi-UTM izilungiso, kunye nenketho yokukhetha ...
AutoCAD-AutoDesk, Iiphotography, Ukulanda
Zoba polygon imiyalelo kunye nomgama ukusuka Excel ukuya Microstation
Iminyaka embalwa edluleyo ndapapasha isihloko esabonisa indlela yokuqulunqa idatha kwi-Excel ukwakha i-polygonal nge-AutoCAD, ngaphandle kokuyenza yonke imigaqo-nkqubo: @distancia <angle .... Ngenye imini sasisesikolweni se-AutoCAD, umntu wandibuza ukuba oko kungenziwa ngelayini lomyalelo we-Microsation. I ...
Ngethuba elidlulileyo ndandizibuza le nto, kwaye ekubeni umhlobo ubonakala ephuthumayo kwaye namhlanje ngumhla wokubhiyozela izinto ezininzi, nasi isixhobo esikuvumela ukuba uguqulwe ukulungelelaniswa kweendawo, iidridi zibe zi-decimals. Kutheni itafile yokuguqulwa Kuyinto eqhelekileyo ukufumana izilungelelaniso ezise-degrees, imizuzu, imizuzwana, ...
Iiphotography, Ukulanda, Google umhlaba / imephu
Makhe sibone ukuba yintoni le ngongoma: Ndineenkcukacha ze-polygonal kunye nezikhokelo kunye nemida, kwaye ndifuna ukwakha kwi-AutoCAD okanye kwi-Microstation. Ngaphambili siye sabona ukuba i-AutoCAD inendlela yayo yokondla olu hlobo lwedatha phantsi kwefayile @dist <ngelixa ku-Microstation lwenziwa nge-AccuDraw. Ewe, ngokuphendula yethu ...
AutoCAD-AutoDesk, Ukulanda, Microstation-Bentley, Topography
Esi sithuba ekhawulelana Diego, of Paraguay lusenza lo mbuzo ilandelayo: uyakholiswa ukuba ambulise ... esithile ixesha eyadlulayo kufuna ababeze ngempazamo angafuni website yakho Ndiyifumene kakhulu umdla, zombini, babaleka njengoko ngendlela enobungane yokuthetha nesayensi yakho. Ndingathanda ukukubuza, ukuba uyazi naziphi na ...
Kwiposi langaphambili sasibonise iphepha le-Excel ukuguqula ii-Geographical coordinates ukuya kwi-UTM kwiphepha elenziwa nguGabriel Ortiz. Makhe sibone ngoku esi sixhobo esenza inkqubo efanayo ekuchaseni, oko kukuthi, ukuba neendlela zokubambisana kwifomathi ye-UTM (i-Universal Traverso de Mercator) nokwazi indawo, ukuyiguqula kwii-latitudes ...
AutoCAD-AutoDesk, Iiphotography, Ukulanda, Google umhlaba / imephu
Le template iququzelela ukuguqulwa kwamalungiselelo eendawo kwiimigangatho, imizuzu kunye nemizuzwana ukuya ku-UTM. 1 Indlela yokungena kwedatha Idata kufuneka iqhutywe kwiphepha elingcono, ukuze ifike kwifom efunekayo. Ewe, imimiselo eqhelekileyo malunga nemigangatho yemilinganiselo eyamkelweyo kufuneka iyabahlonela ...